१) बैकको वित्तिय स्वास्थ्यबारे केही बताइदिनुहो्स न ?
अहिले हामीहरुको पुष मसान्तसम्म दोश्रो चौमासिकको प्रगती राम्रै छ, बोर्डले दिएको रणनीति र टार्गेट अनुसार । टार्गेटहरु पुरा गरेका छौ । अलिकति खाली तरलता सम्बन्धमा ‘मिक्सम्याक्स’ डिपोजिटको समस्या छ, कहिले काँही । अरु त सबै राम्रो नै छ ।
अर्को, हामीले राष्ट्र बैकले तोके बमोजिमको ८ अर्ब पूँजी पनि पु¥याइसकेका छौ । पुषमा बैकको साधारणसभा पनि भएको थियो । त्यो बेला हामीले बोनस शेयर निस्कासन गरेर ८ अर्ब ११ करोडको चुक्क्ता पूँजी पु¥याइसक्यौ ।
२) राष्ट्र बैकले तोके बमोजिमको ४ गुणा पूँजीवृद्धि गरेसँगै त्यही स्प्रीडमा व्यापार विस्तार गरी मुनाफा आर्जन गर्न बैकले के कस्ता योजना र कार्यक्रम अघि सार्दैछ ?
हाम्रो पुँजी त पहिला नै बढी नै थियो । केही बर्ष अघाडी नै राष्ट्र बैकले ४ अर्ब पुँजी बनाउ भनेको थियो । हाम्रो त्यही बेला त्यो थियो । त्यो बेला पनि हाम्रो मुनाफा बढी नै थियो । हाम्रो अहिले नै कोर पँुजी ११ अर्ब जति छ, रिर्जभ सहित गरेर । त्यसकारण हामीलाई पुँजीवृद्धिले त्यस्तो खालको समस्या ल्याउला जस्तो लाग्दैन । अर्को ब्राञ्च विस्तार हामिले गर्न खोजिरहेका छौ । यो बर्ष ५ ओटा हामीले खोलिसक्यौं । अहिले नेपाल राष्ट्र बैक र अर्थमन्त्रलयले ४११ गाउँपालिकामा नीजि बैकहरुलाई जान भनेको छ । त्यसमा हामीले ३ ओटा ठाउँ पहिचान गरेका छौ र अर्को ४ ओटा ठाउँ पनि हेरिरहेका छौ ।
३) अहिले बैकहरुमा लगानी योग्य पूँजी अभावका कारण ब्याजदर बृद्धिको समस्या चुलिएको छ । यो अवस्था कतिन्जेल रहला ?
यो त मलाई पनि थाहा भएन । नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्च अलिकति बढ्यो भने केही समस्या सामाधान होला । अहिले भर्खर अर्थमन्त्रीमा पूर्वगर्भनर समेत रहेका युवराज खतिवडा आउनु भएको छ । उहाँले पनि अलिकति निर्देशन दिएर अर्थमन्त्रालयबाट राष्ट्र बैकसँग समन्वय भयो भने यो समस्या केही सामाधान होला की भन्न सकिन्छ । हामीले चाँही पुराना गा्रहकहरुको बिजनेसलाई रोक्ने गरी काम गरेका छैनौ । हाम्रोमा त्यस्तो समस्या पनि छैन ।
४) संघीयता कार्यान्वयमा गएको छ । राष्ट्र बैकले पनि बैकहरुलाई संघीय रुपमा आफुलाई परिमार्जन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । संघीयतामा बैकहरुले आफुलाई कसरी परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
त्यो हामी हेर्दै जान्छौ । अहिलेसम्म हामीले हाम्रो ब्राञ्चहरुको हेर्दाखेरी, कहाँ कहाँ राख्ने भन्दाखेरी जहाँ बिजनेसहरु छन् । त्यहाँ जाने भन्ने छ । संघीयता भएपछी प्रदेश राजधानीहरु भए । त्यसमा विस्तारै भौतिक पुर्वाधार तयार हुन्छन् । त्यसपछि हामीहरु ती ठाँउहरुमा पनि जान्छौ । सबै बैक जान्छन् त्यहाँ ।
५) संघीयता सफल बनाउन बैकहरुको भुमिका के हुन्छ ?
बैकहरुको केही भुमिका हुन्छ । त्यहाँ लगानी गरेर, त्यहाँको विकास गतिविधिमा सहभागी भएर भुमिका हुन्छ । तर बैकिङ क्षेत्रको रेगुलेटर राष्ट्र बैक भएकाले हामी त्यो स्टेटकै बंैक हुदैनांै । त्यहाँ गएर कति डिपोजिट उठाउन सक्छौे, कति लेन्डिङ गर्न सक्छौ त्यो चाँही हामी मनिटर गर्छौ ।
६) बैकहरुलाई पूँजीवृद्धिसँगै व्यापार बढाउनु पर्ने चुनौती छ । यसै चुनौतीकै घडीमा मुलुक पनि संघीयतामा गएको छ । बैकहरुको लागि संघीयता अवसर पनि हो की ?
खाली हामीलाई अलिकति के कन्फीउजन छ भने संघीयतामा गएपछि त्यहाँ हामीले बाध्य भएर ब्राञ्च खोल्नुपर्छ की पर्दैन । त्यो हामीलाई थाहा भएन । जति बाध्य ग¥यो भनेपनि राष्ट्र बैकको रेगुलेटर भएर हाम्रो केन्द्रिकृत अपरेशन चाँही हुन्छ । कोर बैकिङ त काठमाण्डौमै हुन्छ । त्यहाँ ब्राञ्च मात्रै हुन्छ । अनि क्षेत्रिय अफिसहरु पनि खोल्न दिएको छैन राष्ट्र बैकले । खोल्यो भनेपनि दुर्गम क्षेत्रमा ६० प्रतिशत ब्राञ्च खोल्नपर्छ, अनिमात्रै पाइन्छ भन्ने प्रकारका नियमहरु छन् । त्यसलाई अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्छ राष्ट्र बैकले ।
७) हिमालयन बैंकमा संस्थापक र शेयरधनीहरुबीच विवाद भन्ने प्रकारका समाचार आइरहेका हुन्छन् । त्यो विावद काय छ वा सल्टिइसक्यो ?
अहिले विवाद केही छैन । के भएको छ भने नयाँ बाफिया आएपछि हामीले भर्खर साधारणसभामा हाम्रो प्रबन्धपत्र नियमावली संशोधन ग¥यौं । ८ बाट ७, प्रमोर्टरबाट ४ जना बाट ३ मा गएका छौ । त्यो कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा जान्छ । त्यसपछी राष्ट्र बैकले स्वीकृति दिएपछि अनि हाम्रो बोर्ड डाइरेक्टर सस्थागत रुपमा ७ जनामा झार्नु पर्छ । अहिलेको स्थीतिमा ७ ओटा डारेक्टर चाँही छ । एउटा डारेक्टरसीप ८ हुँदाखेरीमा आउनु भएको छैन । अहिले त्यसमा मनोनित मान्छे पठाउन खोजेकोमा बाफियाले ७ मा रोकेको हुनाले त्यो अहिले गर्न नसक्ने भएको छ । त्यति मात्रै हो । बैकमा अरु त्यस्तो केही विवाद छैन ।
८ ) हिमालयन बैकको कृषि, जलविधुत क्षेत्रमा लगानीको अवस्था कस्तो छ ?
ठीक छ । हामीले कृषिमा राष्ट्र बैकले तोकेको सिमा पुरा गरेका छौ । पर्यटन र जलविधुतमा चाँही हाम्रो अलिकति कम छ ।
७) अन्त्यमा, केही बैकहरुका सिइओहरुले आफनो कार्यकाल पुरा नगरी बीचैमा बैक भटाभट छाड्ने क्रम बढेको छ । के कारण होला ? यहाँलाई के लाग्छ ?
मलाई लाग्छ बोर्ड र सिइओको कुरा नमिलेर त्यो भएको होला । बिजनेस बढाउन नसकेर वा चुनौती सामना गर्न नसकेर त्यो गर्नु भएको होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।